Home » Creative Writing » ဝိတ်ဂိမ်း ဒိုင်ယာရီ – Weight Gain Diary
Posted by ဇီဇီ on Feb 24, 2016 in Creative Writing, Food, Drink & Recipes, Local Guides, My Dear Diary, Travel | 34 comments
ဂျန် ၃၀ ရက်နေ့ညနေ ရောက်တော့ ကိုယ့် အဖွဲ့တွေ မွသဲတို့ မက်စေ့လှမ်းပို့ပြီး တားတယ်။ အပြင်စာမစားနဲ့အူးတဲ့။ ကိုယ်က ကျောက်ဖြူရခိုင် ဆိုင် ခြေလှမ်းပြင်နေမှကိုးးး။
ဟုတ် .. မစားပါဘူးပေါ့။ အာ့နဲ့ တောင်ဥက္ကလာရပ်ကွက် အတွင်းထဲ တောင်ဥက္ကလာ စာတိုက် နားက”ဥက္ကလာ ခေါက်ဆွဲဆိုင်” ကနေ ခေါက်ဆွဲကြော် ထမင်းကြော် နံကင် မှာစားလိုက်တယ်။ မီးခိုးနံ့သင်းတဲ့ ခေါက်ဆွဲကြော် ငတ်နေတာမို့ စားလို့ကောင်းတာ။ (ရပ်ကွက် အပြင်က အစာမှ မဟုတ်။ အပြင်စာဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲနော့)
ဂျန် ၃၁ ရက်ကျ ကိုယ့် အဖွဲ့တွေနဲ့ တွေ့သလေ။ မနက်ကို FMI အိမ်ယာထဲက “သပြေရိပ်” မှာ ထိုင်သေးတယ်။ ခရီးစဉ်ရဲ့ ပထမဆုံး လက်ဖက်ရည် ပေါ့ဆိမ့်လေး သောက်ရတာပေါ့။ ကျန်တဲ့သူတွေ စားတဲ့ နန်းကြီးသုတ်ဆိုတာ မြည်းလိုက်သေးတယ်။ မဆိုးပါဘူးး။ မန်းလေးသူမို့ မန်းလေးကို မမှီဘူးလို့ပဲထင်တယ်။
မွဝေအိမ် ကူးတဲ့ အချိန်မှာ အစားတွေကတော့ အိမ်လက်ရာတွေ အစုံမို့ …….
မွ ဝေ လုပ်ထားတဲ့ ဆူရှီး အပြင် အဲဒီမှာ ကောက်တေး ဘဆွေရဲ့ ကောက်တေး စ မြည်းဖူးကြတာပဲ။
“ကျောက်ဖြူ ရခိုင်ဆိုင်” ကြက်သောက်ဆမ်း
ညဘက် တုန်စိန် တို့ အောင်မိုးသူတို့နဲ့ ချိန်းလိုက်သေးတယ်။ ဝေဇယန္တာ စီးတီးမတ်မှာ။ “Happy Noodle & Cafe” တဲ့။ ကိုယ်က ညစာ အိမ်မှာ စားခဲ့တာမို့ ကော်ဖီပဲ သောက်လိုက်တယ်။ ကောင်းတယ်။ မိုးသူလာတော့ ပြောတာ ဒီဆိုင်က နာမည်ကြီးသတဲ့။ ခေါက်ဆွဲတို့ ထမင်းနယ်တို့ ကောင်းတယ်တဲ့။ အင်းယားလမ်းမှာ ဆိုင်ပင်ရင်းရှိသတဲ့။ ဗိုက်က ဘယ်လိုမှ မရတာမို့ မစားခဲ့ရပဲ တေးထားလိုက်ရတယ်။
၁၅ ရက်နဲ့ ၁၆ ရက် ကတော့ အိမ်မှာပဲ ထူးမခြားနား စားနေတာပါပဲ။
ကော်ဖီ ၂ ခွက်လည်းသောက်ခဲ့တယ်။ ညီမလေးက သင်္ဘောသီးထောင်း ၃ ဘူးထည့်ပေးလိုက်သေးးး။ စားရင်း တစ်ယောက်ထဲ တစ်ဘူးကုန်သွားသေးး။ ဆိုင်ကိုတော့ သူ့ကို မေးကြပါကုန်။
နေ့ခင်းကျ ကိုနိုဇိုမိနဲ့ ချိန်းထားတာနဲ့ (၂ယောက်ထဲ မီဟုတ်ပါပု၊ တခြားသူတွေပါ ပါပါတယ်)
မွသဲ ရွေးတဲ့ ဆိုင်က ကိုယ် စားချင်နေတဲ့ ဆိုင်ဖြစ်နေရောပဲ။ “Happy Noodle & Cafe” ပါ။ အင်းယားလမ်းထဲက။.
၁၈ ရက်နေ့တော့ အမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မမာ အိမ်ကို သွားစားတယ်။ မမာချက်ထားတဲ့ ဟင်းထမင်းတွေ အပြင် မွညို ရော မွသဲ ရော မွနို ရော ယူလာတဲ့ အစားအသောက်တွေ ….. ဟီးဟီးး
ဂလိုပဲ တန်အောင် ကြံရတာပေါ့အေရယ်
ကျနော်သာ ဆိုရင်တော့ ”အစားအသောက်”တွေ အကြောင်း ပိုစ့်တင်ရင်….
၀ါးတီးတွေအကုန်ဘယ်လိုလုပ်.. တထွာလောက်ထဲ.. ထည့်ပြန်သွားတယ်မသိ…။
တဂျီးကလဲ တစ်ရက်တစ်ထွာ ထည့်တာနေမှာပေါ့
အဲ့လို စားနိုင်သောက်နိုင်တာများ နဲတဲ့ကုသိုလ်မှတ်လို့နော်…
သရေတောင်ကျတယ်။ မနက်စောစောစီးစီး စားစရာလေးတွေမြင်ရတာ။ စားနိုင်တာကို အားကျတယ်။ တချို့များကျတော့ ကိုယ့်လစာကိုယ်တိုင်သုံးပြီး အိမ်လည်း မပေးရတာတောင် ကိုယ်စားဖို့ကို နှမြောနေတတ်တဲ့သူတွေ့ဖူးတယ်။ ပိုက်ဆံရှိရဲ့သားနဲ့ မစားရက်မသောက်ရက်ဖြစ်နေတဲ့သူ့ကိုကြည့်ပြီး သနားတောင်သနားသွားတယ်။
အစားအတွက် ဝီရိယလုံ့လ စိုက်ထုတ်မှုမှာ
Oriental က ကော်ဖီမိုက်တယ်နော်.. မမဂျီး..ခါးဆိမ့်ဆိမ့်လေး..
မမဂျီးနောက်တစ်ခါ ပြန်လာမှ တစ်နေရာနည်းနည်းနဲ့ ဆိုင်ကုန်ပတ်စားမယ်…
ဒီဦးစံရှားနဲ့ ဟိုဦးစံရှား ဘာကွာလဲဟင်..
စု တု ပြု ပေမယ့် သေသပ်တယ် မဟုတ်လား..
ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ တစ်ရက်ပဲ တွေ့လိုက်နိုင်ပါတယ်…။
ဘဲစား စားခဲ့လား လူမိုက်ခင်ဇော်… ဘိုချုပ်ဈေးရှေ့မှာ စပို့ရှပ်၊ ဂျင်းပင်န် နေကာမျက်မှန်နဲ့ လာဘ်ပိုက်ရပ်နေတဲ့ ဘဲလေးတွေ ကောင်းမှကောင်းစ်
တစ်ရက်လောက် အုကြောင်ညွှန်းတာ သွားဆွဲအူးမှဘာ
နာက ဇူဇကာဘတ် အဲလေ
မကြီးစားတာကို ကျတော် အမီလိုက်နေတယ်။ ဖေ့စဘွတ်မှာ ပုံတွေကို လိုက်ခ် လိုက်နှီပ်တာ လက်တာညောင်း ပုံတွေမကုန်သေးလို့ ပြန်ပိတ်လိုက်တယ် ဟိဟိ။
မန်းလေး နန်းရှေ့ဈေးကနေ အရှေ့ဘက်နားလေး
ဟယ် .. ဟုလားး
ခုဆို ဆန်ပြုတ် နဲ့ ၂ ပါးသွားနေရဒယ် ဘဖော။